UKRAINE WAXAY HAGAAJISAY HEERKEEDA MUSUQMAASUQA - UKRAINE
Transparency International - oo ah urur caalami ah oo caalami ah oo la dagaallanka musuqmaasuqa iyo baaritaanka heerka musuq-maasuqa aduunka oo dhan, ayaa soo saaray liiska sannadlaha ah ee musuq-maasuqa, kaas oo Ukraine uu dhaliyay 29 ka mid ah 100 dhibcood. Warka wanaagsan ayaa ah in horumarinta laba-dhibcood ee sannadkii hore, taas oo muujinaysa dib-u-habeeynta musuqmaasuqa ee Ukraine ay hirgelisay, saameyn gaar ah leh. Transparency International ayaa muujisay isbeddel wanaagsan oo lagu yareeynayo xadgudubyada hay'adaha dawliga ah, bilayska iyo xoogagga hubaysan, iyo xisaabtamida weyn ee soo iibsiga dowladeed.
Ma ahan war wanaagsan oo sidaas ah Ukraine ayaa tirakoobtay 131 ka mid ah 176 dal oo ka mid ah qiimeynta musuqmaasuqa adduunka. Transparency International ayaa sheegtay in garsoorka uu ku sii jirey isla heerkii musuqmaasuq ee ka dhexjiray xilligii Janukovych. Waxay sheegeen in aysan jirin wax tallaabooyin ah oo lagu soo celinayo hantida ka imanaysa xukuumadda Yanukovych iyo asxaabtiisa sida caddayn cad oo tan. Dhibaatadu waxay tahay in Ukraine waa in ay hagaajisaa heerka musuqmaasuqa si loo xaqiijiyo maalgashiga gudaha.
Waqtigan xaadirka ah, lacag aad u badan oo dhaqaale, oo Ukraine si aad ah u baahan tahay, ayaa ah mid aan gaari karin sababtoo ah iskaashiga maamulka aan ku filneyn iyo dadaalka ugu weyn. Maalgashadayaasha hay'aduhu waxay fulinayaan dadaalkiisa iyo khatarta musuqmaasuqa loo arko mid aad u weyn, taas oo joojinaysa socodka maalgashiga, gaar ahaan lagama maarmaanka u ah warshadaha warshadaha.